अब पाँच रुपैयाँमा एक लिटर स्वस्थ पानी – Health Post Nepal
अब पाँच रुपैयाँमा एक लिटर स्वस्थ पानी
२०७७ फागुन १ गते १०:५३
काठमाडौंका ३ ठाउँमा वाटर एटिएम सञ्चालनमा आएका छन्। शंखधर पार्क (रत्नपार्क) काे टिकट काउन्टरसँगै, स्वयम्भू भगवान पाउ र बालाजु उद्यान प्रवेशद्वारसँगै वाटर एटिएम स्टेशन राखिएका हुन्।
यो ठाउँलाई महानगरले ‘जरुंहिति’ नाम दिएको छ । वटुवाको प्यास मेटाउन काठमाडौंमा जरुंहिति थिए। घरमा पानी लिएर आउने गृहिणीले यी हितिमा एक एक अङ्खोरा पानी राखिदिने गर्थे । त्यो पानी पिएर वटुवा प्यास मेटाउँथे । यस्ता स्थानहरु क्रमशः हराउन थालेपछि महानगरले गत चैत ९ गते स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन स्मार्ट वाटर भेन्डिङ् मेसिन (वाटर एटिएम) राख्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग सम्झौता गरेको थियो।
बटुवालाई चाहिएको ठाउँ र चाहिएको मात्रामा स्वच्छ पिउने पानी उपलव्ध गराउनु एटिएम स्थापनाको उद्देश्य भएकाे बताइएकाे छ। अहिले उपभोक्तालाई नचाहिए पनि १ लिटर पानी अनिवार्य किन्नु पर्ने बाध्यता छ। एटिएम जडानपछि आफूलाई चाहिने जति मात्र पानी किन्न सकिने भएको छ । अहिलेको प्रणालीभित्रै १ हजार ५ सय लिटरको र त्यससँगै छेउमा ५ हजार लिटरको ट्यांङ्की राखिएको छ । मेलम्चीको पानी वितरण भएपछि मेलम्चीको पाइप प्रणालीमा सोझै जडान गर्ने योजना छ ।
सम्झौताबमोजिम चालु आर्थिक वर्षभित्र वडा ४ को शंखपार्क, वडा १५ स्वयम्भूको भुइँखेल, वडा १६ को बालाजु पार्क, वडा २८ को शंखधर पार्क र वडा ३१ को ट्रलीबस सेवा भएको कम्पाउण्डमा वाटर एटिएम राखिने महानगरे जनाएको छ।
यी ठाउँमा वाटर एटिम स्थापना गरेर आउँदो ३ बर्षसम्म सञ्चालन व्यवस्थापनको काम बोर्डले गर्नेछ भने महानगरपालिकाले एटिम राख्ने ठाउँ, बिजुली र सुरक्षा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ। त्यसअनुसार बोर्डले ३ ठाउँका प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने बाँकी २ ठाउँमा प्रणाली जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।
‘प्लाष्टिकरहित सहरको परिकल्पनामा सहभागी बनौँ’ नारा लेखिएको बोर्डसँगै प्रणाली जडान भइसकेका वाटर एटिएमहरुको विहिबार उद्घाटन गरिएको हो। उद्घाटनका क्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री मणिचन्द्र थापासहित उपस्थित पदाधिकारीले ‘वाटर भेन्डिङ मेसिन’ मा सिक्का राखेर कप र पानी निकाली पिएका थिए।
पानी पिएपछि मन्त्री थापाले, ‘पहिलो चरणमा उपत्यकाका १५ ठाउँमा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेकाे र विस्तारै मुलुकभरिकै सहरमा सेवा विस्तार हुने बताए। मन्त्री थापाले नवीनतम सेवाका लागि स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गर्दै जाने बताए।
‘मेलम्ची अहिले राजधानीवासीका लागि निकै महत्वपूर्ण छ। मेलम्चीको पानी आउने अन्तिम तयारी भइरहेका बेलामा यस्तो प्रविधिको सुरुवात हुनु खुसीकाे कुरा हो,’ सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले भने. ‘एक लिटर नै पानी किनेर खानुपर्ने बाध्यतालाई यो प्रविधिले अन्त्य गरेको छ । पानीको उपलब्धतासँगै शौचालय पनि सहज उपलब्ध हुनुपर्छ ।’
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बार्डले उपत्यकाका १५ ठाउँमा यस प्रकारका प्रणाली जडान गर्दैछ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणाका अनुसार स्थापनापछिका ३ महिना सञ्चालन व्यवस्थापन खर्चसहित प्रणाली जडानको लागत करीब १५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ हो । उपत्यकाका सबै प्रणाली जडान गर्दा करीब २ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
कसरी चलाउने वाटर एटिएम?
वाटर एटिएम एउटा उपकरण हो । यसको प्रयोग गर्दा सुरुमा तिरेको २ रुपैयाँमा एउटा २०० मिलिलिटर पानी अट्ने कप र २०० मिलिलिटर पानी पाइन्छ । त्यसपछिका हरेक २०० मिलिलिटरको पानीको मूल्य १ रुपैयाँ पर्छ । त्यसमा आफूलाई आवश्यकता भएअनुसार पानी लिन सकिन्छ । यदि कसैले बोतल लिएर जाने हो ५ रुपैयाँमा १ लिटर पानी भर्न सकिन्छ ।
क) मेसिनमा १ रुपैयाँको सिक्का मात्र चल्छ ।
ख) गोजीमा सिक्का पैसा छैन भने १० वा ५ रुपैयाँको नोटको सिक्का साट्न सकिन्छ ।
ग) सिक्का साट्न वाटर भेन्डिङ मेसिन सिक्का साट्ने मेसिन राखिएको छ ।
घ) साटेको सिक्कामध्ये १ रुपैयाँको सिक्कालाई कप डिस्पेन्सर मेसिनको सिक्का हाल्ने ठाउँमा छिराउनुपर्छ । यसबाट २०० मिलिलिटर पानी अट्ने कागजको कप आउँछ ।
ङ) कपलाई लगेर धाराको तल राख्ने ।
च) १ रुपैयाँको सिक्कालाई धारासँगैको सिक्का हाल्ने ठाउँमा छिराउने ।
छ) यसमा २०० मिलिलिटर शुद्ध पिउने पानी आउँछ ।
ज) थप पानी खान मन लागे फेरि १ रुपैयाँको सिक्का खसाउँदा २०० मिलिलिटर पानी पाउन सकिन्छ ।
झ) १ लिटर पानी लिनु परे बोतल थापेर १ रुपैयाँका ५ वटा सिक्का खसाउने । १ लिटर पानी प्राप्त हुन्छ ।
ञ) प्रयोग गरिसकेको कपलाई कन्टेनरमा फालिदिने ।